Ajjeechaan suukanneessaa magaalaa Dambi Doollootti dargaggoo Oromoo irratti raawwate – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAjjeechaan suukanneessaa magaalaa Dambi Doollootti dargaggoo Oromoo irratti raawwate
Ajjeechaan suukanneessaa magaalaa Dambi Doollootti dargaggoo Oromoo irratti raawwate.
(SBO – Caamsaa 11/2021)
Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambi Doollootti guyyaa har’aa ganama (Caamsaa 11/2021) humni waraanaa PP kanneen ‘humna addaa Oromiyaa’ jedhanii of waaman dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu Kabbadaa jedhamu erga to’atanii booda ajjeechaa irratti raawwatan.
Humni waraanaa qaama seerawaa hin taane kan seeraan ala aangoo dheereffachuu barbaadu PP’f ajajamu kun dargaggoo kana qabanii gara marfata magaalaa Dambi Doolloo bakka ‘senterii’ jedhamuun beekamu erga geessanii harka duubatti hidhanii booda uummata magaalaa keessaa itti waamanii akka ilaalan taasisuudhaan maatiifi uummata fuulduratti rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan ibsameera.
Amaanu’eel Wandimmuu magaalaa Dambi Doolloo ganda 07’tti kan dhalate yommuu ta’u, barataa kutaa 11ffaati.
Qaamni ajjeechaa kana raawwate PPn “Caasaa Shanee kanneen maqaa Abbaa Torbeen socho’an irratti tarkaanfii fudhanne” jechuudhaan karaa fuula ‘Facebook’ kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dambi Doolloo ibseera.
Qaamni seeraan ala aangoo siyaasaa biyya kanaa qabatee jiru kun torban darbe keessa qaama hin beekamneefi hin jirre “Shanee” shororkeessummaatti moggaasuun ni yaadatama. Labsiin kunis ilmaan Oromoo irratti lola labsameefi ajjeechaa gara jabinaa akkasii ifatti raawwachuuf akka ta’e, akkasumas, rakkoon biyya kanaa akka hin furamne karaa cufuuf akka ta’e ABO dabalatee qaamonni adda addaa ibsaa turaniiru.
Kana malees, komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibse eeruudhaan barruun ‘Reporter’ jedhamu dhiyeenya kan baase “qaamni biyya bulchu dirqamaan meeshaa waraanaa namatti kennee, rifeensa nam-tolchee hojjechiisee maqaa Shaneetiin ajjeechaa raawwachuuf jira” jedheera. Amma ifatti kan mul’ataa jiru kana ta’uu ajjeechaa suukanneessaa magaalaa Dambi Doollootti dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu irratti raawwaterraa hubachuun ni danda’ama.
Ammaan duras magaalaa Dambi Doollootti dargaggoo Hayiluu Efireem jedhamu ajjeesanii haadha isaa reeffarra teessisuun kan yaadatamudha.
Saliha Sami fi Daniel Areeri eenyu akka ta’an laalaa